Russia's Strategy on Quantum - Yuko အနုညာတစီရင်
နေအိမ် / Aceris ဥပဒေ SARL / Quantum အပေါ်ရုရှားရဲ့မဟာဗျူဟာ – Yuko အနုညာတစီရင်
Quantum အပေါ်ရုရှားရဲ့မဟာဗျူဟာ – Yuko အနုညာတစီရင်
16/07/2015 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ရုရှား'S မဟာဗျူဟာ Yuko ခုံသမာဓိတွင် Quantum ဖို့အရေးပါတုံ့ပြန်ရန်မဟုတ်ပါ
ခုံရုံး Yuko ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုလျော်သောအဘိုးပြတ်ရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်ရန်အတွက်, တောင်းဆိုသူများရှေ့ကိုထား 13 ဖြစ်နိုင်သမျှအခြေအနေတွေ. အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများကို USD ကနေအရွယ်ရှိ 30 အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံ 114 ဘီလျံပေါင်းများစွာ (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1701 - 1710) နှင့်ကး၏သုံးခုအဓိကစုံကိုအောက်ပါခဲ့ကြသည်:
Yuko ဆန့်ကျင်အခွန်အကဲဖြတ်သည့် Insight web studio ၏တစ်ဦးဖောက်ဖျက်ခဲ့ကြ
Sibneft ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းကျရှုံးဖို့ - ထို Insight web studio ၏များ၏ဖောက်ဖျက်သည့် Yuko စေသော,
Yuko တစ်ဦးရှိခဲ့ 70% အဆိုပါ NYSE စာရင်းဝင်ခံရအခွင့်အလမ်း
အဆိုပါအခွန်အကဲဖြတ်သည့် Insight web studio ၏တစ်ဦးဖောက်ဖျက်မဟုတ်ကြ, ဒါပေမယ့်အကဲဖြတ်၏နောက်ဆက်တွဲဘက်တော်သားတစ်ဦးဖောက်ဖျက်ခဲ့.
အဆိုပါအကဲဖြတ်၏ဘက်တော်သားနေသော်လည်း, Yuko ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာချွတ်ဆပ်ဖို့အချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ငွေပမာဏကိုပေးတော်မူပြီမယ်လို့ 24 ဘီလီယံအထိ (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကိုယ်စားပြုသည့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပမာဏ၏).
တောင်းဆိုသူများ '' ကျွမ်းကျင်သူသုံးကွဲပြားခြားနားသောအဘိုးပြတ်နည်းလမ်းများအလေးချိန်အားဖြင့်တစ်ဦးဖန်တီးလုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုရောက်ရှိ (DCF 50%, နှိုင်းယှဉ်ကုမ္ပဏီများ 40% နှင့်နှိုင်းယှဉ်အရောင်းအဝယ် 10% (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1717)) နှင့် Yuko များအတွက်အဘိုးပြတ်နေ့စွဲတစ်ခုခုကိုနိုဝင်ဘာ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သင့်ကြောင်းအဆိုပြုထား 2007 နေ့စှဲ (Yuko အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ချွတ်လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့်အခါ) ဒါမှမဟုတ်ဆု၏နေ့စွဲ (ခုံရုံးဖြစ်ယူဆထားတဲ့ 30 ဇွန်လ 2014).
ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေနှစ်ဦးစလုံးအဘိုးပြတ်ရက်စွဲများမှာ Yuko entity ရဲ့တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်း, ထံမှလက်ခံရရှိမဟုတ်မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ခွဲဝေထည့်သွင်း 2004 သို့ 2007, အဆိုပါဆုချီးမြှင့်များ၏ရက်စွဲကိုရန်အဘိုးပြတ်နေ့စွဲကနေခွဲဝေအပေါ်ကြိုတင်နှင့်-The NYSE စာရင်းဝင်ခံရအခွင့်အလမ်းကိုဆုံးရှုံးဆုစိတ်ဝင်စားမှု (လစ်ဘာအတိုးနှုန်း + 4%) (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1722 - 1724).
ဒါဟာနည်းစနစ်များနှင့်ကကျွမ်းကျင်သူရဲ့ဒုတိယအစီရင်ခံစာဖို့နောက်ဆက်တွဲကနေအခြခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတောင်းဆိုသူများက 'ခုံရုံးအောက်ပါတောင်းဆိုသူများအတွက်အခက်အခဲများရှိပါကြောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများကအများဆုံးဖွယ်ရှိတရားစွဲဆိုမှုမှာသူတို့ရဲ့မော်ဒယ်တွေအပြည့်အဝပျော့မိတ္တူထုတ်ဖော်မပြုခဲ့' 'ကြောင်းမှတ်သားရပါမည် (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1728). မစ္စတာအရ. BDO ၏ McClay (လန်ဒန်), ဒါကြောင့်တဦးတည်းပါတီဆိုင်ရာခုံရုံးသည်၎င်း၏နည်းစနစ်အပေါငျးတို့သခြေလှမ်းများနားလည်နိုင်စေရန်နှင့်လည်းဆုံးဖြတ်ရန်ပျော့မိတ္တူတွေ့ရမှာပါကြောင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, အထူးသဖြင့်, ဗိသုကာပြဿနာများ, ယူဆချက်သဘောထားကှဲလှဲမှုနှင့်ရှေ့နောက်မညီ, input ကိုအမှားအယွင်းများနှင့်မော်ဒယ်ခြုံငုံအလုပ်လုပ်တယ်ရှိမရှိ.
ဖြေဆိုသူရဲ့ချဉ်းကပ်မှု ပို. ရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့သည်, ကအားလုံးကိုမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အပြုသဘောကိစ္စတွင်ရှေ့ဆက်မထားခဲ့ပါဘူးအဖြစ်, မဟုတ်ဘဲအမှားများနှင့်တိုက်ခိုက်တောင်းဆိုသူများ '' ကျွမ်းကျင်သူရဲ့အဘိုးပြတ်ထွက်ထောက်ပြဖို့ရွေးချယ် (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, para.1783). ဥပမာ, ဖြေဆိုသူဟာအဘိုးပြတ်နေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်. တောင်းဆိုသူများနှင့်အတူသဘောမတူပေမယ့်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာနေ့စွဲထွက်မသတ်မှတ်ဘူး (အဲဒါကိုမကုန်မီဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုပေမယ့် 2004 ယင်းကြားနာစစ်ဆေးမှုမှာ (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, para.1738)). ဤသည်ချမှတ်ရန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မဟာဗျူဟာခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာကွာ chip ဖို့အမြဲဖြစ်နိုင်အဖြစ်ဆန့်ကျင်ပါတီအနိုင်ရသင့်တယ်.
ဖြေဆိုသူရဲ့အကျွမ်းကျင်သူများကတောင်းဆိုသူများ '' တွက်ချက်မှု "ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားမှားယွင်းမှုများနှင့်အတူတွေ့နေရ" (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1743, 1744) Rosneft နှင့် ပတ်သက်. ဒေတာဖယ်ထုတ်ပြီးသဖြင့်တောင်းဆိုသူများ '' နှိုင်းယှဉ်ကုမ္ပဏီများအဘိုးပြတ်တညျ့နှင့်, Gazprom Neft နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေနိုင်ငံတကာကိုအဓိကရေနံကုမ္ပဏီအတွက်လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုရောက်ရန် 2007 ၏အမေရိကန်ဒေါ်လာ 32 တောင်းဆိုသူများ '' လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုထက်နိမ့်ဘီလီယံ (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1746). ဖြေဆိုသူကိုလည်းနှိုင်းယှဉ်ကုမ္ပဏီများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရအငြင်းပွားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်အရောင်းအဝယ်အနေနဲ့စီးပွားရေးရှုထောင့်ကနေ indefensible ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားသည် (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1747) ဒါပေမယ့် Yuko သို့မဟုတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မဆိုအဘိုးပြတ်ကိန်းဂဏန်းများ valuating များအတွက်နည်းစနစ်ရှေ့ဆက်ယူဆောင်ဘယ်တော့မှ.
မစ္စတာ. BDO ၏ McClay (လန်ဒန်) သောထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ဟုထင်မြင်ချက်သည်မှားယွင်းမှုများနှင့်အတူတွေ့နေရ"ဖြေဆိုသူ '' ကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာများအတွက်စတော့ရှယ်ယာထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်လာခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းအချို့ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအစီရင်ခံစာ template ကိုပင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒီမှာ, တောင်းဆိုသူများ '' ပထမဦးဆုံးကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာအမှန်ပင်ချို့ယွင်းချက်ခဲ့သည်; YNG ၏အဘိုးပြတ် (Baikal ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေလေလံတင်ရောင်းချ Yuko '' အဓိကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းခွဲ, မကြာမီပြီးနောက်ပြည်နယ်ပိုင် Rosneft ခြင်းဖြင့်ဝယ်အတု entity) ဖြေဆိုသူထောက်ပြထားတဲ့သိသာနှင့်သိသာထင်ရှားသောအမှားအယွင်းများပါရှိသော. တောင်းဆိုသူများ '' ကျွမ်းကျင်သူထို့နောက်မိမိအအမှားတွေကိုဝန်ခံပေမယ့်အခိုင်အမာအတူတူနောက်ဆုံးပမာဏကိုရောက်ရှိဖို့အခြားနံပါတ်များကို inflating အားဖြင့်သူ၏ဒုတိယကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာတွင်ထိုသူတို့အဘို့လျော်ကြေးငွေ (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1744, 1745). ခုံရုံးကြောင်းသူ၏ "ဖော်ပြထားအဖြစ်တောင်းဆိုသူများ '' ကျွမ်းကျင်သူရဲ့အမှားများကိုမိမိအယုံကြည်စိတ်ချရထိခိုက်ပျက်ပြားစေခြင်းနှင့်သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချဆုံးရှုံးဖို့ခုံရုံးကိုဦးဆောင်သည်ဟုဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တောင်းဆိုသူများ '' ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၎င်း၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်ခုံရုံးမှကန့်သတ်အကူအညီ"တောင်းဆိုသူများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြုပြင်တာတွေတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည် (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1884).
ရှုထောမဟာဗျူဟာအချက်အနေဖြင့်, ကတုံ့ပြန်တောင်းဆိုသူ၏ကွမ်တမ်မှယုံမပေးရန်အလို့ငှာတွက်ချက်မှုမပေးပါဘူးမကြာခဏအမှုဖြစ်ပါသည်. နောက်ဆုံးတော့, တုံ့ပြန်အဘိုးပြတ်အပေါ်တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုဆောင်ကြဉ်းဖို့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမရှိပါဘူးနှင့်ဆိုင်ရာခုံရုံးရဲ့လုပ်ငန်းသိသိသာသာခက်စေရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခုံရုံးညျမတရားမှုအဖြစ်ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေ '' တောင်းဆိုမှုများပယ်ချပင်ကွမ်တမ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမမြျှောလငျ့နိုငျအခါတုံ့ပြန်မကြာခဏအကြပ်အတည်းရင်ဆိုင်နေရ. ဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်သူများက၏ကုန်ကျစရိတ်များပေးရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်အသုံးမထုတ်ကိုဖွင့်မယ်တဲ့အခါမှာကြားနာအပါအဝင်?
ကွမ်တမ်အပေါ်အပြုသဘောကိစ္စတွင်တခါတရံရလဒ်များကိုနိုင်ပါတယ်ဆောင်ခဲ့မဟုတ်. အခြားဘက်ခြမ်းကနေတောင်းဆိုသူ၏ကွမ်တမ်ပေမယ့်ဘယ်အရာကိုမျှပင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလက်ခံမှုလည်းမရှိသည့်အခါလုပ်ဖို့ဆိုင်ရာခုံရုံးကဘာလဲ? အဲဒါကိုခက်ခဲခုံရုံးတုံ့ပြန်မယ့်အမှုကသာတစိတ်တပိုင်းချမှတ်ရန်စေသည်နှင့်ဆိုင်ရာခုံရုံးအပေါ်ဆုအခြေခံမှတစ်ဦးတည်းသာပါတီရဲ့အဘိုးပြတ်ရှိပါတယ်အတိုင်းဤချဉ်းကပ်မှုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အန္တရာယ်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Yuko အတွက်, ဖြေဆိုသူရဲ့ကျွမ်းကျင်သူသိသိသာသာတောင်းဆိုသူများ '' ကျွမ်းကျင်သူများက '' တွက်ချက်မှုအချို့အလွန်ကြီးမားအမှားများထုတ်ညွှန်ပြခြင်းအားဖြင့်အရေးဆိုမှု၏တန်ဖိုးကိုလျှော့ချအတွက်အောင်မြင်ခဲ့. ထိုကွောငျ့, တောင်းဆိုသူများ '' ကျွမ်းကျင်သူဖြေဆိုသူရဲ့ဝေဖန်မှုအချို့ (တောင်းဆိုသူ '' နှိုင်းယှဉ်ကုမ္ပဏီများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဗားရှင်းနဲ့နိယာမအမှားအယွင်းများရန်ချိန်ညှိ "တညျ့") ခုံရုံးမှအသုံးဝင်ခဲ့သည်. နှုတ်အဘယ်အရာကိုတိုးတက်အတွက် "- အဆိုပါခုံရုံး '' ကိုတုံ့ပြန်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူရောက်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်"a" ကိုအသုံးဝင်သော"အကဲဖြတ် - တစ်ဦးမှာ" အမေရိကန်ဒေါ်လာပမာဏအတွက်တညျ့ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတန်ဖိုးကို 67.862 ဘီလီယံနှင့်, တစ်ဦးယူဆ 90/10 ရှယ်ယာ / ကြွေးမြီမြို့တော်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ, ၏အဖြစ်ရှယ်ယာတန်ဖိုးကို 21 နိုဝင်ဘာလ 2007 အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ 61 ဘီလီယံ '' (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1783).
M ကအလိုအရ. BDO ၏ MacGregor (လန်ဒန်), ကျွမ်းကျင်သူများ၏အစည်းအဝေးတစ်ခုပညာရှင်တွေရဲ့အကြားကြီးမားသော gulf စဉ်းစားဤကိစ္စတွင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေကြပြီ. နည်းပညာဆိုင်ရာအဘိုးပြတ်ပြဿနာများကိုပြေလည်ပြီနိုင်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးရှင်းလင်း) အစည်းအဝေးတစ်ခုအားဖြင့်၎င်း,, ပညာရှင်တွေရဲ့၏ကုန်ကျစရိတ်များပေးထား (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 8.5 တောင်းဆိုသူများနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအဘို့အသန်းပေါင်းများစွာသော 4.5 ဖြေဆိုသူများအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသော), ဆွေးနွေးမှုများခြောထိရောက်သောကုန်ကျခဲ့မယ်လို့.
ကျွမ်းကျင်သူများကအစည်းအဝေးများ၏ထောက်ခံမှုအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အငြင်းအခုံကြောင်း, ခုံရုံးပညာရှင်တွေရဲ့အားဖြင့်တင်ပြသည့်သက်သေအထောက်အထားများကိုအသုံးပြုလမ်းကိုစဉ်းစား, ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပြည့်စုံရရှိသောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ထိုသို့, ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှလာမယ့်ရှေ့တော်၌အဘိုးပြတ်အကြောင်းကိုအသိပေးအမြင်များ.
တဦးတည်းပါတီသင့်ပေမယ့်, ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအတိုင်းအတာအထိ, အခြားဘက်ခြမ်းရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံ, တဦးတည်းပါတီကွမ်တမ်အပေါ်တစ်ဦးအမှုတင်သွင်းပါဘူးရှိရာကကျွမ်းကျင်သူများကဆိုဘုံကိန်းဂဏန်းအပေါ်သဘောတူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လက်တွေ့ဖြစ်လာ, မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီမှာအမှုဖြစ်သကဲ့သို့.
– Olivier Marquais, အပေါင်းအဖေါ်, Aceris LLC
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပဋိညာဉ်စာတမ်းစာချုပ်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး, လန်ဒန်အနုညာတစီရင်, PCA အနုညာတစီရင်, ပြည်သူ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ, ရုရှားကအနုညာတစီရင်, ပြည်နယ်တာဝန်ယူမှု, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်